နေကာမျက်မှန်နှင့်အဖုံးများ။ အမြင်အားကစားနှင့်မြို့ပြဖက်ရှင် | The Indian Face - THE INDIAN FACE
50nd ယူနစ်အတွက် 2% လျှော့စျေး
ကုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်း- SEGUNDA50 သင့်ဝယ်ယူမှုအတွက် ပေးချေသည့်အခါ
နေကာမျက်မှန် ဦး ထုပ်
နေကာမျက်မှန်များ ပရီမီယံ စုဆောင်းမှု
အားကစား စိတ်ကူးစိတ်သန်း စာလုံးများ
ဦး ထုပ် THE INDIAN FACE
ဦး ထုပ် HANUKEII
ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်မှုတွင် နေထိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်ရန် မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး ဤကဲ့သို့ နေထိုင်ရခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ ငါတို့ဘဝဟာ ငါတို့ရဲ့ဘဝ၊ တခြားဘယ်သူမှမရှိဘူး။ တတ်နိုင်သလောက်ချစ်ပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ။
Freeride သစ်သား / အပြာရောင်
Polar သစ်သား / အပြာရောင်
Polar သစ်သား / အနက်ရောင်
Freeride အနက်ရောင် / အပြာရောင်
Freeride အနက်ရောင် / အနီရောင်
Polar အနက်ရောင် / အနက်ရောင်
Free Spirit သစ်သား / အပြာရောင်
Freeride အစိမ်းရောင် / အနက်ရောင်
Freeride Wood က / အနက်ရောင်
ရောဂါ Black / Blue
အားကစားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုပုံစံဖြစ်သည်။ အားကစားက သင့်ကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေတယ်၊ ​​Adrenaline က သင့်ကို အသက်ရှင်စေတယ်။
Born to be Free အနီရောင် / Black က
Born to Ultratrail အနီရောင် / Black က
ကမ်းလှမ်းချက်စျေးနှုန်း1895 € 18.95 € ပုံမှန်စျေးနှုန်း 4000 € 40.00 € သင်သည် €21.05 သက်သာသည်။
Born to be Free အဖြူ၊ အပြာ၊ အနီ
Free Soul အဖြူရောင်အနီနှင့်အနက်ရောင်
Born to be Free Black က / မီးခိုးရောင်
Born to be Free အစိမ်း / အပြာ
Born to be Free အဖြူ / အစိမ်း
Born to Snowboard အပြာနှင့်အနီ
Born to Ultratrail မီးခိုးရောင် / အပြာရောင်
Born to be Free အပြာ / အဖြူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Woman Surf အဖွဲ့မှ ဖန်တီးထားသော အထူးနေကာမျက်မှန်များစုစည်းမှု
ပစိဖိတ်စကျင်ကျောက် / Burgundy
ပစိဖိတ်လိပ် / အနက်ရောင်
ပစိဖိတ်အနက်ရောင် / အနက်ရောင်
ကျေးရွာပန်းရောင် / အနက်ရောင်
ပြုံးပါ ဘဝက အံ့သြစရာ !!
တခါတရံမှာ ကြာရှည်ခံပေမယ့် အမြဲတမ်း လှပပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ အသက်ရှင်ခြင်း၏စွန့်စားမှုကိုခံစားပါ။
အရောင်းရဆုံး စာလုံးများ HANUKEii
Flamingo ပန်းရောင် / အပြာရောင်
လိပ်အဖြူ / အညို / မီးခိုးရောင်
လင်းပိုင် Turquoise အပြာရောင်
လင်းပိုင် Grey က / အဖြူရောင် / အပြာရောင်
သင့်ဘဝရဲ့ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ညှစ်ပါ။
သင့်အသက်တာကို သတိမပြုမိစေရန်အတွက် အမှတ်အသားတစ်ခု ထားခဲ့ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ လွတ်ပါစေ!!
ကမ်းလှမ်းချက်စျေးနှုန်း6900 € 69.00 € ပုံမှန်စျေးနှုန်း 18500 € 185.00 € သင်သည် €116 သက်သာသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်စျေးနှုန်း6900 € 69.00 € ပုံမှန်စျေးနှုန်း 19500 € 195.00 € သင်သည် €126 သက်သာသည်။
သင့်နေကာမျက်မှန်များကို သိမ်းဆည်းရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
CAMPER ၌သင်အကြိုက်ဆုံးအရာ ၀ တ္ထုများ
အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄
၂၀၂၂ အမျိုးသမီးများအတွက်နေကာမျက်မှန် ၄ လုံးကိုသင်လက်မလွတ်ချင်ပါ
အဲ့ဒါဘာလဲ THE INDIAN FACE?
The Indian Face ၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်နှင့် excel မှအလိုဆန္ဒ၏။ The Indian Face ကအားကစား, သဘာဝနှင့် adrenaline ဖြစ်ပါတယ်။
The Indian Face လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကျော်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးအားကစားလေ့ကျင့်မှုများကိုစိတ်ချရသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုဂရုတစိုက်နှင့်ချစ်ခင်စွာဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည့်အားကစားသမားများ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လိုအပ်ချက်အသစ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာသည်။
အမှတ်တံဆိပ်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စားသုံးသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး နေရောင်ခြည်၏သက်ရောက်မှုကို ဆန့်ကျင်၍ အမြင်အာရုံနှင့် အသားရေကျန်းမာရေးကို သေချာစေမည့် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။ တဆက်တည်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို ဒီဇိုင်းမျိုးစုံဖြင့် ဖက်ရှင်သို့ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် စားသုံးသူတစ်ဦးစီတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏အရသာနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့် အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အမြဲရွေးချယ်နိုင်စေပါသည်။
နေထိုင်ခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ မိခင်သဘာဝမှပေးသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်သင်စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်လိုသောအံ့ဖွယ်နေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
100% အားကစားသမားများ: အားကစား၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စွန့်စားမှု၊ သူငယ်ချင်းများ…အရာအားလုံးကသင့်ကိုသင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်နှင့်ပိုမိုရှင်သန်ရန်နှင့်လုံ့လရှိရန်ကူညီသည်။
En The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အထက်တန်းလွှာနှင့်အပျော်တမ်းအားကစားသမားများ၊ စွန့်စားစွန့်စားသူများနှင့်လွတ်လပ်သောစိတ်ဓာတ်များများပြားလာသောအသိုင်းအဝိုင်းများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအခိုင်အမာယုံကြည်စိတ်ချပြီး၎င်းတို့ဝတ်ဆင်သည့်အခါလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုခံစားရသည်။
En The Indian Faceလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာရှနှင့် Oceania ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်သို့ဖြန့်ဝေသည်။ ဒီဂျစ်တယ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအသစ်များပေးသောအဆောက်အအုံများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေးလံသောတိုင်းပြည်များကိုဖုံးကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ လူမှုကွန်ယက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအခြားတိုက်ကြီးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများတွင်လူသိများအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏စရိုက်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်နိုင်သောကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်စရာများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိသုံးစွဲသူများ၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ လာပါ The Indian Face ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်။
ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးအဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရည်အသွေးပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အလားစက္ကန့်တိုင်းကိုအများဆုံးအသုံးပြုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသောစံများမှထွက်ပြေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံအသစ်များသို့အလျင်အမြန်ပြေးဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေး The Indian Face ၎င်းသည် အလွန်ကွဲပြားသောကြောင့် အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်အပိုင်းများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအတွက် မျက်မှန်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည့် နေကာမျက်မှန်များရှိသည်။ ၌ The Indian Face အမျိုးသမီးများရော အမျိုးသားများအတွက်ပါ ကွဲပြားသောအရောင်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် ဦးထုပ်များကို ပေးဆောင်ပေးသည့်အတွက် ဦးထုပ်များကိုလည်း ထားရှိပေးပါသည်။
ရာသီ၏လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဦး ထုပ်များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် The Indian Face.
ယခုနှစ်တွင်ခေတ်မှီဆန်းပြားသောအရိပ်အမျိုးမျိုးနှင့်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်လာသည်။ ကျနော်တို့ရှေ့မျက်နှာပေါ်မှာတစ် ဦး ပုံဆွဲသို့မဟုတ်လိုဂိုနှင့်အတူကွက်ထုပ်ဒီဇိုင်းကြောင့်လူသိများကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်ထုပ်အမျိုးအစားများသည်အကောက်ခွန် ဦး စီးမှသည်အားကစားအဖုံးအထိဖြစ်သည် ၎င်းတို့အားလုံးသည်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်တင်ဆက်ထားပြီးစျေးကွက်၏ရှေ့ဆောင်များအားအမြဲသစ္စာရှိကြသည်။ ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်ဟုခေါ်တွင်ဘေ့စ်ဘောထုပ်ရန်။
ဘေ့စ်ဘောအသင်းအဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏အ ၀ တ်အစားတွင်သိုးမွှေးအပိုဆောင်းအပိုပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်များမွေးဖွားလာသည်။ ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ဘေ့စ်ဘောကလပ်ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်အသစ်ဖြစ်လာသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်အပြောင်းအလဲများသည်ဤထုပ်များနှင့်ပုံသဏ္toာန်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူတို့၏လူကြိုက်များမှုကိုအမြဲတမ်းနဂိုအတိုင်းထားရှိမည်၊ The Indian Face.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့စုဆောင်းမှုအထုပ်ထဲမှာသင်လည်းထရပ်ကားထုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ စားသုံးသူတစ် ဦး စီသည်သူတို့လေ့ကျင့်ထားသောအားကစားအားလုံးနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် ဦး ထုပ်တွင်သူတို့ဝတ်လိုသည့်နောက်ခံအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားကစား ဦး ထုပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ငါတို့နှင့်အတူလိုက်သောသမိုင်း၏သောကြောင့်ထရပ်ကားထုပ်ကိုအထူးနှစ်သက်ကြသည်။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းကို ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ကြော်ငြာခြင်းအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအသားကုမ္ပဏီများနှင့်လယ်သမားများမှထရပ်ကားများသည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန် ဦး ထုပ်ကိုစတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့မျက်နှာစာတွင်အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သောထုံးစံအတိုင်း ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြတ်ကျော်ကာဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်လာသည်။ ထရပ်ကားထုပ်များပေါ်ရှိစန်းသည် ၂၁ ရာစုအစပိုင်းတွင်မှေးမှိန်မသွားဘဲအဆုံးမဲ့ဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်စျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသည့်နေကာမျက်မှန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးရာသီတစ်ခုစီ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်နာသောခေတ်မီနေကာမျက်မှန်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအရသာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်စတုရန်းပုံသဏ္inာန်၌နေကာမျက်မှန်များနှင့်ပိုမိုဂန္ထဝင်နှင့်အချိန်ကုန်သက်သာသည့်မော်ဒယ်များရှိသည်။ မည်သို့ပင်တစ်နှစ်၏အချိန် The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်သောအခါဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်များကိုသင်တွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုပါသည်။
ကုမ္ပဏီထံမှကျနော်တို့လည်းနေကာမျက်မှန်ကိုဆက်ကပ် polarသူတို့သည်သင်တို့ကိုဆောင်ခဲ့မည် သာ။ ကြီးမြတ်အမြင်အာရုံနှင့် Ocular ချောမွေ့။ On The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသော optical ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏လူတို့လက်လှမ်းမီနိုင်သောနေကာမျက်မှန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူများ၏သစ္စာရှိမှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အတွက် The Indian Face အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ကိုက်ညီသော unisex ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများနေကာမျက်မှန်နှင့်ပိုမိုချိန်ညှိနိုင်သည့်မော်ဒယ်များရှိသည်မှာမှန်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့တွင်ရှည်လျားသောပုံစံများဖြစ်သော "cate ye" သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကြီးလွန်း။ အဝိုင်းပုံစံရှိသောမော်ဒယ်များရှိသည်။ အစိတ်အပိုင်းများတွင်ပိုမိုကြီးမားသော၊ စတုရန်းပုံသဏ္andာန်များနှင့်ပိုမိုကြည်လင်သောအရောင်များဖြင့်အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားမော်ဒယ်များလည်းရှိသည်။
အချိန်ကာလများပြောင်းသွားပြီးအရသာလည်းပြောင်းလဲသွားပြီ။ ယနေ့တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်နေကာမျက်မှန်များမရှိတော့သည့်အပြင်အမျိုးသမီးများမျက်လုံးတွင်အမျိုးသားများအတွက်နေကာမျက်မှန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များ၊ ဦး စားပေးမှုများနှင့်စတိုင်များကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို၎င်းတို့အားဝတ်ဆင်လိုသူများအားကမ်းလှမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအားသက်သောင့်သက်သာရှိသောဇုန်မှထွက်ခွာရန်နှင့်သူတို့လိုချင်သောမျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ တိကျစွာဘေးဖယ်ထားခံရဖို့။